AMBILOBE : Rafotsibe iray maty nianjeran’ny hazo mantaly lehibe tao an-tranony
Nitrangana loza namoizana ain’olona tao Ambilobe, ny folakandron’ny alahady 6 oktobra teo. 8 octobre 2019
Araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana dia hazo mantaly lehibe iray tao Antafiankasaka manakaiky ny kianja monisipaly no nianjera tamina trano ka nahafaty vehivavy lehibe iray na matoevavy iray natory tao anatin’ilay trano. Araka ny fanampim-baovao hatrany dia somary nitsoka mafy ny rivotra tamin’io andro alahady io, ka nampianjera ilay vodina mantaly hatramin’ny vahatra na fakany. Nahavoa ireo trano tamin’ny manodidina fa tandrify an’ilay rafotsibe no voa mafy ny firodan’ilay hazobe ka nahafaty azy tsy tra-drano.
Raha ireo hazoben’ny mantaly ao Ambilobe no resahina dia azo ambara fa anisan’ireny hazo efa antitra efa an-jato taonany maro, raha tsy hilaza fa rango tamin’ny fanjanahantany. Tahaka izay hita tao Ambanja saika manamorona ny lalana ireny ny hazo mantaly tao an-toerana. Fa noho ny fahatsapana sao hitera-doza dia nandray andraikitra ireo tompon’andraikitra tao an-toerana, nanapaka ireo hazobe efa antitra efa poakaty ireny na ahazoana aloka aza.
Araka izany dia ilaina fandraisana andraikitra sy fanaraha-maso ireo hazo mantaly ao Ambilobe ireo mba hisoroana amin’ny loza mety hitranga, tahaka izao namoizana ain’olona izao. Manaitra ny tompon’andraikitra voakasika mba hijery akaiky ny mahasika ireny hazobe efa antitra ao an-tampon-tanànan’Ambilobe fa tsy andrasana efa mitera-doza vao hikoropaka araka ny fitarainan’ireo olona nanatri-maso ity loza nahafatesana olona salama maty tampoka izao.
Maty tsy tra-drano ilay tovolahy nitondra “moto” LOZAM-PIFAMOIVOIZANA (160) 14 janvier 2020 Lehilahy milaza mahatafiditra mpiasa ao amin’ny « Finance » nosamborina FISOLOKIANA AVO LENTA (154) 14 janvier 2020 Vehivavy novonoim-badiny dia naleviny tao an-tanin-davanila SOANIERANA-IVONGO (106) 13 janvier 2020 Maty momoka ary tsy nisy vokany ny fitakian’ny Tim FAMBOLENA KORONTANA (99) 15 janvier 2020 Trano sy tanànan’olona ahiana harodan’ny lavaka nangadiana fasika LOZA MITATAO (86) 14 janvier 2020 Nitsidika ny Minisiteran’ny Serasera sy kolontsaina ROVA MANJAKAMIADANA (74) 13 janvier 2020